Chii chinonzi Omni-Chiteshi? Zviri Kukanganisa Sei Kutengesa Mwaka Wezororo uyu? | Martech Zone
Makore matanhatu apfuura, dambudziko rakakura rekushambadzira pamhepo yaive kugona kubatanidza, kuenzanisa, uyezve kudzora mameseji mune yega yega chiteshi. Sezvo chiteshi chitsva chakabuda uye chichiwedzera mukuzivikanwa, vashambadzi vakawedzera mamwe mabheji uye mamwe mabhuru kune yavo yekugadzira purogiramu. Mhedzisiro yacho (iyo ichiri yakajairika), yaive murwi unotyisa wezviziviso uye mameseji ekutengesa akaisa pasi pehuro hwega hwega. Kudzokera shure kunoenderera - nevatengi vakashatirwa vasingazvinyore uye vachihwanda kumakambani avaimbofara nekuita bhizinesi navo.
Nehurombo, mavambo ezwi iri Omni zvinoreva zvese… uye ndomaitiro evashambadzi anowanzo bata nzira. Ini ndinoshuva dai tingadai takanyora izwi riri nani, senge rakarongedzwa kana kufambira mberi chiteshi kushambadza Otomatiki pamatanho kazhinji anobata kumwe kwekubatana uku, asi isu kazhinji hatigadzirise iwo ekukurukurirana kana.
Chii chinonzi Omni-Chiteshi?
Omnichannel, iyo zvakare inonyorwa omni-chiteshi, iri kutaura kune chimwe nechimwe chezviitiko zvinosanganisirwa nemutengi wakapihwa. Mukati mekutengesa, omni-chiteshi chiri kutaura kune chakabatana chiitiko chekushambadzira pamasvikiro (aka chiteshi). Panzvimbo pekuti mutengi awane kubhombwa pamasvikiro, ruzivo rwacho rwakagadzirirwa uye rwakaenzana panotarisirwa ruoko. Saka kushambadzira kweterevhizheni kunogona kutyaira vanhu kuenda kune URL pane saiti iyo mutengi anogona kuitisa pamusoro wenyaya, kana kuti zvimwe kusaina kune yambiro dzenhare kana maemail anoenderera mberi nekubatana. Chiitiko chinofanirwa kuve chisina musono uye kufambira mberi, pane kudzokorora uye kugumbura.
Omnichannel chitoro kana zviitiko zvekutenga zvinoreva iko kubatana chaiko pakati pechitoro nemidziyo yedhijitari, ruzivo rwevatengi rwakagovaniswa pakati pehunhu hwepamhepo nekudyidzana uye mutengesi wemuno, uye - zveshuwa - mitengo, kuendesa, uye kurongeka kwemasheya pakati pechitoro nedhijitari nzvimbo. Kana zvese zvikave kushanda musina, zvinotungamira kune yakakura yekutenga ruzivo. Izvi zvinotungamira kukutengesa kukuru uye kuwedzera kutengesa mune ramangwana pamutengi. Muchokwadi, omnichannel vatengi vane 30% yakakwira yehupenyu kukosha kupfuura avo vanotenga vachishandisa chiteshi chimwe chete.
Sezvo vatengi vari kuwedzera chiteshi-agnostic, uye yakawanda omnichannel murwendo rwevatengi, vatengesi vari kupaza nekusangana nezvavanoda vari kuona kudzoka kukuru mwaka uno wekutenga zororo. Izvo hazvisisiri nezve zvidhinha nedhaka vs. e-commerce. Vatengesi vanhasi vanobudirira vanoziva kuti vanofanirwa kuita kuti rwendo rwevatengi rive musono ruzivo munzira dzese uye zvese zvishandiso kuti vatengi vasanzwe kuti vanofanirwa kusarudza. Stuart Razaro, VP Yekutengesa kuNorth America, Signal
Iyi infographic yakachinjika izere neyekutanga-bato stats pane izvo omnichannel vatengesi vanotarisira uye nemadhijitari ematanho ane pesvedzero pakutenga-muchitoro. Inosanganisira zvimisikidzo kubva kumhando dzakadai seAmazon, Michael Kors, naWarby Parker kuratidza maitiro avanokwikwidza kukwikwidza, uye vanoongorora matambudziko akakosha vatengesi anotarisana nawo nhasi. Zvimwe zvakakosha:
64% yevatengi vepamhepo vanotaura kutumira kwekumhanya sekukosha kwesarudzo dzekutenga
90% yevatengi vemu-chitoro vashanyira webhusaiti uye vobva vatenga rwechipiri kana rwechitatu online
Chete 36% yevatengi ndiyo yaizoshanyira chitoro kana pasina ruzivo rwekuverenga rwaiwanikwa online
Tags: 2015Amazonbest buymusi wezuvaKisimusidata yemutengidelivdeloittezisozororoimba depotkusanganamacy'smichael korsnordstromomni-chiteshiomnichannelomnichannel kutengesa zvakareomnichannel shopperchitorochiratidzoWalmartwarby parker